डा. केशव पौडेल संग बे एरियामा भेटघाट तथा अन्तरक्रिया - Enepalese.com
डा. केशव पौडेल संग बे एरियामा भेटघाट तथा अन्तरक्रिया
इनेप्लिज २०७१ पुष ३० गते ११:४० मा प्रकाशित
एनआरएन अमेरिकाको आगामी नेतृत्वका लागि डा. केशव पौडेलले आफ्नो अभियान जारी राख्नु भएकै बेलामा यही १७ जनवरी, २०१५ मा बे एरियामा भेटघाट तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम हुने भएको छ ।
बे एरियाबासीहरुको संयुक्त पहलमा सोही दिन दिउँसो १२ बजेदेखि ४२३ ब्रड् वे, अर्बनकरीमा अन्तरक्रिया हुन लागेको हो । एनआरएन अमेरिकाको गत निर्वाचनमा डा. पौडेलले खगेन्द्र जिसीलाई समर्थन गर्दै आफूले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा दिनुभएको उम्मेदवारी फिर्ता लिनु भएको थियो ।
एनआरएन अमेरिकाको आगामी नेतृत्वका लागि अभियान शुरु गर्नुभएका डा. पौडेलले ठूलो सफलता पाउँदै आउनुभएको छ । यसबाट उत्साहित डा. पौडेलले चाँडै नै उम्मेदवारी घोषणा गर्ने तयारी गर्नुभएको छ ।
एनआरएन अमेरिकाको आगामी नेतृत्वका लागि डा. पौडेलको पक्षमा अमेरिकाभरि नै लहर उर्लिरहेको छ । अमेरिकाबासी नेपालीहरु एनआरएन अमेरिकाको आगामी नेतृत्व डा. पौडेललाई सुम्पिनका लागि आतुर देखिएका छन् ।